Child – Page 8 – Healthy Life Journal
ကျောင်းအိမ်သာညစ်ပတ်လို့ တစ်နေ့လုံး ဆီးမသွားခဲ့ဘူး မေမေ . . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ဆီးအောင့်တယ် မေမေ” ကျောင်းက ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အမောတကောပြေးလာပြီး အိမ်သာထဲအတင်းဝင်ကာ ပြန်ထွက်လာသည့် သမီးလေး နှင်းဖွေးက မျက်နှာရှုံ့မဲ့လျက်ပြောသည်။ “ကျောင်းမှာ ဆီးမသွားခဲ့ဘူးလားသမီး” “မသွားချင်ဘူး မေမေ၊ ကျောင်းက အိမ်သာကညစ်ပတ်ပြီး နံစော်နေလို့ မသွားချင်ဘူး” တကယ်တော့ သမီးလေးနှင်းဖွေးက...
ရန်ဖြစ်တဲ့ မိဘ၊ စိတ်ထိခိုက်ရရှာတဲ့ ရင်သွေး
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့က အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ နေရာသစ်တစ်ခု ကိုသွားတဲ့အခါ ထုံးစံအတိုင်း လမ်းကြိုလမ်းကြား တွေလည်းရောက်ရော ဘယ်နေရာမှန်းမသိတော့ တာနဲ့ကားရပ်ပြီး မေးဖို့ကြံတယ်။ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် လမ်းတောင်မမေးနိုင်တော့ဘူး။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးကို အော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းပြီး တုတ်နဲ့ရိုက်နေတာ . .ပြောနေဆိုနေပုံက...
ကလေးကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ခါရမ်းပါက ကလေးတွင် ဖြစ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များ
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့ ကလေးထိန်းတွေအနေနဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာတွေနဲ့ စိတ်တွေရှုပ်ပြီး ဒေါသတွေထွက်နေချိန်မှာ ကလေးလေးကလည်း အငိုမရပ်၊ ချော့မရဖြစ်နေရင် ဒေါသတွေအားလုံး ကလေးအပေါ် စုပြုံသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အများအားဖြင့် လုပ်မိလေ့ရှိတာက ကလေးရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ဖိညှစ်ကိုင် ပြီးဖြစ်စေ၊ ရင်ဘက်ကနေ...
ဆရာဝန်ပြရန်လိုအပ်သည့် သင့်ကလေးငယ်၏ အသေးအမွှားလက္ခဏာများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နာမကျန်းမှုက မိဘတွေအတွက် ခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ ကလေးဆီမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ အသေးအမွှားလက္ခဏာတွေကို အချိန်မီ သတိပြုမိရင် ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ပြသကာ စောစောကုသနိုင်ပါတယ်။ (၁) မှဲ့ကြီးထွားခြင်း ကလေးကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ဘယ်ခြမ်းနဲ့ ညာခြမ်း ဘက်မညီရင်၊...
အလေးချိန်မပြည့်တဲ့ကလေး (Low birth weigh)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ဒီနေ့မနက်က ကျွန်မ အဒေါ်ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေးမွေးဖွားပါတယ်ဆရာ။ အသက်က ၃၉ နှစ်ပါ။ ကလေးက ၄ ပေါင်ပဲ ရှိပါတယ်ဆရာ။ လလည်းစေ့ပါတယ်ဆရာ။ ကလေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ၂။ သမီးအသက်က ၂၇ နှစ်ပါဆရာ။...
ကလေး အစားနဲ့ အအိပ်မမှန်လို့ . . .
မေး။ ။ ကလေးကထမင်းစားရင် အမြဲလိုအော့နေလို့ပါ။ ညကျရင်လည်း သိပ်မအိပ်ဘူး။ အသက်က တစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ သိချင်လို့ပါ။ ဝေဝေစန်း (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ အစာကြေလွယ်ပြီး အာဟာရပြည့်တဲ့ အစားအစာ ဥပမာ-ကြက်ဥ၊ နို့မှုန့်၊ ကွေကာအုတ်၊...
သင့်ကလေးငယ်၏ ကြောက်ရွံပူပန်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပါ
စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးငယ်တွေဟာ စာစောင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေကနေ တစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ သေဆုံးမှုတွေနဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေ အကြောင်းကို ကြားသိမြင်တွေ့ကာ ကြောက်ရွံ့ ပူပန်စိတ်တွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါတွေ မှာ ကလေးငယ်အနေနဲ့ ပူပင်သောက ပြေပျောက်ပြီး လုံခြုံမှုရှိနေစေဖို့...